ပင်လယ်စာကြိုက်တဲ့သူတွေ စိတ်ခိုင်မှဒီစာလေးကိုဖတ်နော်… ဖတ်ပြီးတာနဲ့စားချင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ အက်မင်လည်းမတတ်နိုင်လို့ပါ :3 1548 views
အခုပို့စ်လေးက ပင်လယ်စာသိပ်ကိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အယ်ကိုတွေ၊ အယ်မတွေအတွက်ပါ….။ လှည်းတန်းစင်တာအပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်လျှောက်သွားတာနဲ့ ဒီဆိုင်ကဘာဆိုင်လဲ ဆိုတာ သိပ်တွေးနေစရာမလိုအောင်ပေါ်လွှင်နေတာ။ ဆိုင်ထဲမှာလုပ်ထားတဲ့ Decoration တွေအရ ကမ်းခြေမှာပင်လယ်စာတွေထိုင်စားနေရတဲ့ Feeling မျိုးလေးရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ ဒီဆိုင်ကပင်လယ်စာတွေရတဲ့ဆိုင်များလားပေါ့။ သိပ်မှန်သွားပြီ။ သူကHledan Center အပေါ်ဆုံးထပ်၊ ရုပ်ရှင်ရုံနားက ‘The Seaside Taste’ ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါ။
ဒီဆိုင်မှာကထူးခြားတာလေးက ပင်လယ်စာကိုမှ ပုံစံမျိုးစုံ၊ အရသာပေါင်းစုံနဲ့ရရှိနိုင်တယ်။ အစက ထင်ထားမိတာ ဒီမှာရမယ့်ပုံစံမျိုးက ထိုင်းစတိုင် အချဉ်၊ အစပ်ပုံစံမျိုးဘက်သွားမယ်ပေါ့။ တပ်တပ်စင်အောင် လွဲသွားပါတယ်ဗျား။ ဒီမှာက ပင်လယ်စာကိုပုံစံပေါင်းများစွာနဲ့ရတယ်။ အရသာအားဖြင့်လည်း အစပ်တွေချည်းမဟုတ်ပဲ အသက်အရွယ်မရွေး စားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုတော့ ကလေးလေးတွေ၊လူကြီးတွေနဲ့ သွားစားမယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့။ ဟင်းပွဲတွေကလဲသိပ်မစောင့်ရဘူး။ (၁၅)မိနစ်၊ မိနစ်(၂၀)ဝန်းကျင်ပေါ့။ ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ ကြာတယ်ထင်ရပေမယ့် တကယ့်တကယ်ဟင်းပွဲ ပူပူနွေးနွေးနဲ့လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးစားလိုက်ရတော့ စောင့်ရတာတော့တန်သွားတယ်ပေါ့။
ဒီမှာ ဈေးနှုန်းတွေကဘယ်လိုရှိလဲ ? ပုံမှန်ဟင်းပွဲအနေနဲ့ ဆိုရင် တစ်ပွဲကို (၃၀၀၀)၊ (၄၅၀၀)၊ (၅၅၀၀)နဲ့ အများဆုံး (၆၀၀၀)ပဲ။ တစ်ပွဲကိုအနည်းဆုံးတော့ (၂)ယောက်စားလို့ရတယ်။ လူများတယ်ဆိုရင်လည်း ညှိပြီး မှာလို့ရတယ်။ တစ်ယောက်တစ်ပွဲအနေနဲ့မှာစရာမလိုဘူး။ လူအရမ်းများတယ် စုစားမယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် (၁၅၀၀၀)တန်တွေ၊ (၁၈၀၀၀)တန်နဲ့ (၂၀၀၀၀)တန်တွေရှိတယ်။ ဟင်းပွဲအကြီးတွေဆိုတော့ လူခပ်များများလေးနဲ့ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူး။
တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဟင်းပွဲတွေမှာဆိုရင် ဒီဆိုင်ရဲ့ Signature Seafood Forest လို့ခေါ်တဲ့ ပင်လယ်စာမြိုင်ဟေဝန်။ သူကိုတော့မီနူးထဲမတွေ့ဘူး။ သူတို့ Page မှာတင်ထားတာတွေ့လို့ ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးမို့စမ်းစားကြည့်တာ။ သူကတော့ ထမင်းနဲ့ပင်လယ်စာအစုံပါတယ်။အသီးအရွက်လေးတွေတောင်ပါသေး ဒါလေးကို Decoration ဆင်ပေးထားတာ ခပ်မိုက်မိုက်လေးရယ်။ ပင်လယ်စာတွေကိုဗန်းထဲထည့်ပေးထားရုံ မကပဲ ကြိုးတွေနဲ့တန်းလန်းချီပြီး ချိတ်ထားတာမျိုး။ ကမ်းခြေအသေးစားလေးထဲရောက်သွားသလိုပဲ။ သူကတော့နှစ်ယောက်ကနေသုံး၊လေးယောက်လောက်စားလုိ့ရတယ်။ ဈေးနှုန်းက(၂၃၀၀၀)ကျပ်တဲ့။ ဈေးများတယ်ထင်နိုင်ပေမယ့်လည်း ပင်လယ်စာကိုမှချက်ထားတာတွေရော၊ ကင်ထားတာတွေအပြင် ကြော်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါ အစုံစားရတယ်။ ပင်လယ်စာအသည်းစွဲကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ ဒါလေးတွေကြိုက်မှာ။ ဒါလေးကိုစားရင်တော့ (၄၅)မိနစ်လောက်ကြိုမှာထားဖို့တော့လိုတယ်တဲ့။ ဘာလို့ဆို ချက်ရပြုတ်ရတဲ့အပြင် အပြင်အဆင်လေးပါလုပ်ရလို့ပါတဲ့။
ဒုတိယအနေနဲ့အက်မင်အကြိုက်ဆုံး ခံတွင်းတွေ့ခဲ့တာလေး။ ဂဏန်းခွက်ကြော်။ မိုက်တယ်ဗျာ။ ဂဏန်းအသားကိုမှဘဲဥနဲ့ကြော်ပြီး ဂဏန်းခွံထဲအစာသွပ်ထည့်ထားတာ။ အရသာက ဆိမ့်ခံနေတာပဲ။ ဂဏန်းသားရဲ့အရသာတွေပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ကြီးစားရလို့ ဒါလေးတော့တော်တော်လေးကြိုက်မိပါတယ်။ ဂဏန်းခွက်ထဲကနေ တူလေးနဲ့ယူယူပြီး ဆော့စ်လေးနဲ့တို့စား။ ရှလွတ်…အခုတောင်ထပ်စားချင်သွားပြီ။ သူကတော့တစ်ပွဲ (၅၀၀၀) ကျပ်ပါ။ သုံးခုပါတယ်။
ဂုံးယောက်မထောင်း - ဂုံးယောက်မကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ဒါလေးစားကြည့်ပါ။ ငါးခုပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် သင်္ဘောသီး၊ ကန်စွန်းရွက်နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး သုပ်ထားတာလေးပါပါတော့ အဲ့ဒါလေးတွေလည်းချဉ်ချဉ်လေးနဲ့ စားရတာမဆိုးဘူး။ သူကတော့တစ်ပွဲ (7800 )ကျပ်။ နောက်…. ကင်းမွန်ကောက်ညှင်းအစာသွပ် - ကောက်ညှင်းကိုမှ ကင်းမွန်အကောင်ကြီးကြီးထဲအစာသွပ်ပေးထားတာ။ ကောက်ညှင်းခပ်ပျော့ပျော့လေးနဲ့ ကင်းမွန်ထုတ်ထုတ်လေးကစားရတာတော့တစ်မျိုးလေးပဲ။ အဲ့ဒါကိုသံပုရာသီးလေးညှစ်စားရင်တောပိုမိုက်တယ်။ သူက တစ်ပွဲကို (4000)ကျပ်။
နောက် ပင်လယ်သောက်ဆမ်း။ ဂဏန်း၊ ပုစွန်၊ ဂုံး၊ ယောက်မ အဲ့ဒါတွေကိုမှ ပူပူစပ်စပ်ပုံစံမျိုးလေး ချက်ပေးထားတာ။ ဟင်းရည်လေးကလည်းအောက်ကမီးလေးနဲ့အပူပေးထားတော့ ပူပူနွေးနွေး စပ်စပ်လေးပဲပေါ့။ စပ်တယ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းကြီးတော့မစပ်ပါဘူး။ တစ်ပွဲကို (၇၅၀၀)ကျပ်။
မက်ဆီကန်ပင်လယ်စာကော်ပြန့် - အပြင်ခွံကြွပ်ကြွပ်လေးကိုမှ ခပ်မိုက်မိုက်အရသာနဲ့အစာပလာတွေက စားရတာကြွပ်ကြွပ်ကြွပ်ကြွပ်နဲ့ တစ်မျိုးလေးစားကောင်းတယ်။ မက်ဆီကန်စာဆိုပေမယ့် ကိုယ်တွေအကြိုက် တွေ့သဗျ။ စားလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲ အကုန်လုံးပေါင်းစားလိုက်ရတဲ့အရသာလေးနဲ့ ဆော့စ်လေးတို့စား ပိုမိုက်တယ်။ တစ်ပွဲကို (၅၀၀၀)ကျပ်။ ငါးခုလောက်ပါတယ်။
ဂုံးစုံကျွန်း - ဂုံးကြိုက်တဲ့သူတွေတော့အကြိုက်တွေ့စေမှာဗျာ။ ဂုံးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေကိုမှ အစိမ်းအနေနဲ့ စားရမှာ။ အစိမ်းအနေနဲ့ဆိုပေမယ့် မြန်မာတွေစားလို့ရအောင်တော့နည်းနည်းလေးပြင်ပေးထားတယ်တဲ့။ ရေခဲလေးတွေနဲ့ထည့်ပေးထားတော့ အေးအေးလေးနဲ့တစ်မျိုးလေးပဲ။ သူကတော့တစ်ပွဲကို (၆၀၀၀)ကျပ်။
အချိုပွဲအနေနဲ့ဆိုရင် - ငှက်ပျောသီးပန်ကိတ်နဲ့လိမ္မော်ဆော့စ်။ ကြက်ဥပန်ကိတ်ထဲကိုမှ ငှက်ပျောသီးကိုအစာသွပ်ထည့်ထားတာလေး။ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ ငှက်ပျောသီးကချိုချိုလေး။ အဲ့ဒါကို Orange Sauce လေးနဲ့တို့စားရင်တော့ခပ်ချိုချိုလေးဖြစ်သွားတယ်။ အက်မင်တော့ဒီတိုင်းစားရတာပိုကြိုက်တယ်။ သူကတစ်ပွဲမှာငါးခုပါတယ်။ ဈေးနှုန်းက (2900) ကျပ်။ အခြားအချိုပွဲတွေလည်းမီနူးထဲတွေ့မိပါတယ်။ တပုံကြီးပဲ။ အက်မင်တော့ဒါပဲစားနိုင်ခဲ့လို့ အခြားဟာလေးတွေတော့ကိုယ့်ဘာသာပဲစမ်းကြည့်ကြပါလို့….။
ဒီဆိုင်မှာထပ်ရတာတွေက ပင်လယ်စာကင်တွေရတယ်။ နောက်ငါးသံပုရာပေါင်း၊ ပဲကြာဇံကြော်၊ ပင်လယ်စာအစပ်ချက်၊ ဟင်းရည်တွေ၊ ဂဏန်းမဆလာ၊ ပြောင်းဖူးထောင်း အဲ့ဒါတွေအပြင်အခြားမီနူးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်လို့။ တစ်ယောက်စာ One Plate Menu တွေလည်းရှိတယ်။ ထမင်းကြေ်ာ၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ဒါနဲ့အဲ့မှာအကြော်စုံပန်းစည်းဆိုတာလည်းရှိတယ်သလား။ ပင်လယ်စာအစုံကိုကြော်ပြီး တုတ်လေးတွေထိုးပြီး ပန်းစည်းစည်းသလိုစည်းထားတာ။ အယ်ကိုတို့ရဲ့အယ်မတွေကို လက်ဆောင်တွေ၊ Surprise တွေလုပ်ပေးချင်ရင်အကိုက်ပဲလို့။ သတင်းလေးမျှပေးခဲ့တာ။သူကတော့တစ်နာရီကြိုမှာရတယ်ဆိုလား ပဲ။ အဲ့တစ်စည်းကို (၁၅၀၀၀)တဲ့။ အဲ့ဒါဝယ်ရင် Coke Zero တစ်လုံးလည်း Free ပေးတယ်တဲ့။ စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းသား။
ဒီဆိုင်လေးက ဈေးနှုန်းလည်းအရမ်းမကြီးပဲ စားရတာလည်းအရသာရှိလို့၊ ဆိုင်ကလည်းအေးအေးဆေးဆေး ရှိပြီး ဆားဗစ်ပေးတာလည်းအဆင်ပြေလို့ ပင်လယ်စာကိုအလွန့်အလွန်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် ပြန်ရှဲပေးခဲ့ ပြီနော်။ ‘The Seaside Taste’ ကလှည်းတန်းစင်တာ အပေါ်ဆုံးထပ်၊ ရုပ်ရှင်ရုံနားမှာရှိပါတယ်။ Reserve လည်းလုပ်လို့ရတဲ့အတွက် 09-73106128, 09-5025354 ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဒါနဲ့ တနင်္လာကနေသောကြာ ညနေ(၃)နာရီကနေ (၆)နာရီအတွင်းစားရင် 20% Discount ပေးနေတယ်တဲ့နော်။ ပြီးတော့သုံးသောင်းဖိုးပြည့်တာနဲ့ Seaside Taste ရဲ့ Member Card ရမှာတဲ့။ အဲ့ဒီကဒ်ကသွားစားတိုင်း 5%Discount ရမှာဆိုတော့ စားမယ့်စားတော့အဲ့ကဒ်လေးရအောင်စားကြပါ :3 ဆိုင်ကသိပ်အကျယ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ အယောက်(၃၀)၊ (၃၅)ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲဆံ့တယ်။ နေ့လည်စာစားချိန်တွေဆိုရင်တော့လူကျတတ်ပါတယ်တဲ့။ ဆိုင်ကမနက်(၉)နာရီကစ ည(၉)နာရီအထိဖွင့်တယ် တဲ့နော်။
ကျေနပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်…။ နောက်မှတွေ့မယ်နော် <3